Ammaanka xarunta Capitol Hill oo aad loo adkeeyay, kadib xog la helay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ammaanka xarunta Capitol Hill oo aad loo adkeeyay, kadib xog la helay
Ammaanka xarunta Capitol Hill oo aad loo adkeeyay, kadib xog la helay
A member of the National Guard walks on Capitol Hill before the beginning of the first day of former US President Donald Trump’s trial before the Senate February 9, 2021, in Washington, DC. – The US Senate puts Donald Trump on trial for inciting insurrection Tuesday, charging into unprecedented constitutional territory and laying bare the national trauma inflicted in the former president’s attempt to overturn his reelection defeat. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)
Ammaanka xarunta baarlamaanka Maraykanka ee loo yaqaan US Capitol ayaa aad loo adkeeyay, kadib markii la helayay warar sheegaya in Khamiista maanta ah “xoog lagu soo geli karo” si ay sheegeen booliska.
Tallaabadan ayaa ka dhalatay kadib markii ay sirdoonka ka war heleen hanjabaad ka timid urur hubaysan, sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska.
Laamaha ammaanka ayaa sheegay inay isu diyaarinayaan khatar kasta oo ka dhan ah xubnaha Congress-ka.
Golaha wakiiladda ee Maraykanka ayaa baajiyay kulan uu maanta lahaa, kadib markii lagu wargeliyay khatarta jirta.
Hase yeeshee waxaa maanta kulankiisa qabsanaya Aqalka Senate-ka si uu uga doodo hindise sharciyeed uu Madaxweyne Biden lacag dhan 1.9 trillion dollar wax uga qabanayo cudurka Covid-19.
Muxuu booliska ka yiri khatarta?
Booliska ilaaliya xarunta US Capitol ayaa sheegay inay qeybaha kale ee laamaha ammaanka kala shaqeynayaan si looga hortago khatar kasta oo ku timaada xaruntaas.
“Si dhab ah ayaan u qaadanayay xogta ku aaddan khatartaas,” ayaa lagu sheegay warka booliska.
“Faahfaahin dheeraad ah kama bixin karno xogta aan helnay, maadaama ay tahay mid aad xasaasi u ah,” ayuu sheegay booliska.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa laba bilood kadib markii dad taageersan madaxweynihii hore, Donald Trump, ay xoog ku galeen gudaha dhismaha.
Xilligaas, xubnaha la doortay ee labada gole ayaa ku guda jirin ansixinta natiijada doorashadii uu ku guulaystay Madaxweyne Joe Biden.
Rabshadahaas oo gilgilay dimuqraadiyada Maraykanka ayaa waxaa ku dhintay shan qof oo uu kamid yahay askari boolis ah.
Waaxda garsoorka ee Maraykanka ayaa dacwad ku soo oogtay in ka badan 300 oo qof oo ka qeyb qaatay falkaas.
Dadka dhacdadaas loo xiray waxaa kamid ah ururada hubaysan ee xagjirka ah sida Oath Keepers iyo Three Percenters.
Xisbiga talada haya ee Dimuqraadiga ayaa falkaas ku tilmaamay weerar fallaaganimo, waxaana uu dacwad ku soo oogaay Trump oo uu ku eedeeyay inuu kiciyay dadkaas.
Trump ayaa sidaa ku noqday madaxweynihii u horreeyay Maraykanka ee laba jeer lagu soo oogo dacwad xil ka qaadis ah, inkastoo labada goor-ba uu ku badbaaday aqalka senate-ka.
Muhiimadda ay leedahay Khamiista
Taageerayaasha urur xagjir ah oo lagu magacaabo QAnon ayaa rumaysan in Khamiista maanta ah ay dhabaha u xaari doonto in Trump uu mar labaad ku soo laabto Aqalka Cad.
Taariikhda maanta ayaa muhiimad gaar ah u leh, maadaama wixii ka horreeyay sanadkii 1933 ay hogaamiyayaasha Maraykanka xilka la wareegi jireen 4-ta March.
QAnon ayaa rumaysan in Trump uu dagaal qarsoon kula jiro dad sheydaanka caabuda oo carruurta faraxumeeya kana tirsan dowladda, ganacsatada iyo warbaahinta.
Laamaha ammaanka ayaa ka war helay dood ku aaddan 4-ta March oo uu ururka QAnon ku yeeshay internet-ka, sida uu todobaadkii hore sarkaal ka tirsan FBI u sheegay wargeyska The Washington Post.
Previous articleMadaxweynayaasha Faransiiska iyo Turkiga oo Qadka Taleefanka ku wada hadlay Mudo kadib.
Next articlekismaayo oo laga hirgaliyay xarunta karantiilka Xanuunka cudurka Covid19
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadlay shirka Afisyoone uga...
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyey shirarka Afisyoone uga socda madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka,...
Madaxweyne Mustafa Muxumed Cumar Oo Xariga ka Jaray Warshad Oxygen Sameeyneyso.
Tiro yaxaasyo oo la baadi goobayaa oo ka baxsaday beer lagu...
Shacabka kenya oo aad uga soo hor jeeda Daymaha Kenya...
Dhaqtarkii ugu waynaa Soomaaliya ee daweynta TB-da oo Muqdisho ku Geeriyooday
Ku dhawaad 100 qof oo muhaajiriin ahaa oo laga soo badbaadiyay...
Wasiirka sirdoonka Israel oo shalay gaaray dalka Sudan